Vibrations [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ > စက်မှုအင်ဂျင်နီယာပညာ > Vibrations
View Full Version : Vibrations
ကဲဆရာပွလေးတောင်းဆိုလို. title အသစ် ၁ ခုစလိုက်ပါတယ် ;D
vibrations ဆိုတာလောကသဘာဝကြီး ၁ ခုလုံးနဲ.စပ်ဆက်နေတာပါ။
ကျွန်တော်တို.အသက်ရှူတဲ.အခါ lungs တွေ vibrate ဖြစ်သွားပါတယ်
ဒီလိုပဲ နားစည်က vibrate ဖြစ်ပြီးမှအသံတွေကိုကြားရတာပါ။
engineer တိုင်း vibration နဲ.အမြဲရန်ဖြစ်နေရမှာပါ။
အလုပ်တိုင်းမှာ viibration ရှိနေမှာပါ
ကဲ vibration ကိုခေါင်းစဉ်တွေခွဲလိုက်ရအောင်၊ကျွန်တော်လေ့လာရသလောက်တော့ ၁၁ ခုရှိပါတယ်။
classifications of vibrations ဆိုပါတော့။ သူ. definition တွေကိုပါဖော်ပြလိုက်ပါတယ်
1. Free (Natural ) Vibrations ဆိုပါတော့
After giving initial disturbance,if the system is left to vibrate on its own without external forces and friction ,it is called free or natural vibration.ဥပမာကတော့ဗျာ oscillation ofasimple pendulum .
2.Forced Vibrations ပါ
ဒီမှာတော. system ၁ ခုထဲကို force 1ခုကိုထပ်ခါတလည်းလည်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာforce vibration ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
ဒီမှာတော.ဗျာ system ထဲမှာ damping element မ၇ှိဘူးဆိုရင် energy ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘူး ဒါမှမဟုတ် friction ကြောင်.ကွယ်ပျောက်သွားတယ် ဒါမှမဟုတ်
တခြား resistance elements တွေကြောင်.ကွယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုရင် ဒါကို undemped vibration လို.ခေါ်ပါတယ်။
အပိုင်း ၂ မျှော် ;D
ဒီစနစ်ကတော့ဗျာ system ထဲမှာ damper element ၁ခုရှိမယ်၊အဲဒီအချိန်မှာ vibration system ထဲမှာenergy ဖြစ်ပြီးအဲဒီenergy ကတခြား resistance ဒါမှမဟုတ် friction တွေကြောင်.ကွယ်ပျောက်သွားတယ်။ဒီtype ကိုတော. Damped Vibration လို.ခေါ်ပါတယ်။
basic elements ofavibration system ဥပမာ mass,spring and damper တွေကိုတော့ Linear Vibration လို.ခေါ်ပါတယ်။
ကျန်တော်လဲvibration အကြောင်းတော့သင် ခဲ့ရပါတယ်။ သိပ် တော့နား မလည်ပါဘူး။
နားလည်သလောက်က တော့ vibration ကိုလိုသလို ထိမ်းချုပ်လိုရချင်တာပါ။
energy loss ဖြစ်တာလို့ တော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြော့် damping ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပါ။
အဓိက ကတော့ result ပေါ် မူတည်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့လဲထပ် ပြီးအကျယ်ရှင်းပြပါအုံး။
ကျနော်က inventor ၇ူး၇ူးနေတာ အကုန်သိချင်တယ်။ တွေးချင်တယ် ဖြန့် ချင်တယ် လက်တွေ့ လုပ် ချင်တယ်။
ကူညီကျ ပါခဗျာ နော်နော်
axil က vibration control ကိုဘယ်မှာလုပ်ချင်တာလဲဗျ
vibration နဲ့ ပက်သက်လို့ natural frequency အကြောင်းနဲနဲ ပြောချင်ပါတယ်။ natural frequency ဆိုတာကတော့ vibration system တခုမှာ အစကတဲကရှိနေတဲ့ frequency ပါ။ vibration system တခုကို design လုပ် ရင် natural frequency ကိုအဓိကထားစဉ်းစားရပါတယ်။system တခု vibrate ဖြစ်ရင် နောက်ထက် forced frequency or damped frequency ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဥပမာ shaft တချောင်းမှာမူလက natural frequency တခုရှိပါတယ်။Torque တခုနဲ့ shaft လည်တဲ့အခါ forced frequency ရှိလာပါပြီ။အဲဒီ frequency ၂ခူ တထပ်တည်း ကျရင် critical vibration ဖြစ်လာပြီး shaft ကို failure ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ shaft က natural frequency 500 rpm ရှိတယ်ဆိုပါဆို့။shaft ဟာ 700,400,300,600 rpm စသည်ဖြင့် မောင်း နိုင်ပါတယ်။ဒါပင်မဲ့ 500 rpm နဲ့ run ရင် shaft ကျိုးသွားနိုင်ပါတယ်။
အမှားရှိရင် ခွင့်လွတ်ပါလို့။ http://physicsed.buffalostate.edu/Wiley/CJ6e/img10/SHO.gif
VIBRATION နဲ. DAMPING ကွာခြားချက်လေး ဆွေးနွေးပေးအပါ။
Vibration ဆိုတာက ဒီလို ......................................................http://i36.tinypic.com/2eycewy.pnghttp://i34.tinypic.com/2uzr046.png
ီDamp ဆိုတာက ဟိုလို .......................... http://i36.tinypic.com/23t38uf.png http://i34.tinypic.com/289bnyb.png
vibration နဲ့ ပက်သက်လို့ natural frequency အကြောင်းနဲနဲ ပြောချင်ပါတယ်။ natural frequency ဆိုတာကတော့ vibration system တခုမှာ အစကတဲကရှိနေတဲ့ frequency ပါ။ vibration system တခုကို design လုပ် ရင် natural frequency ကိုအဓိကထားစဉ်းစားရပါတယ်။system တခု vibrate ဖြစ်ရင် နောက်ထက် forced frequency or damped frequency ဖြစ်ပေါ် လာပါတယ်။ ဥပမာ shaft တချောင်းမှာမူလက natural frequency တခုရှိပါတယ်။Torque တခုနဲ့ shaft လည်တဲ့အခါ forced frequency ရှိလာပါပြီ။အဲဒီ frequency ၂ခူ တထပ်တည်း ကျရင် critical vibration ဖြစ်လာပြီး shaft ကို failure ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ shaft က natural frequency 500 rpm ရှိတယ်ဆိုပါဆို့။shaft ဟာ 700,400,300,600 rpm စသည်ဖြင့် မောင်း နိုင်ပါတယ်။ဒါပင်မဲ့ 500 rpm နဲ့ run ရင် shaft ကျိုးသွားနိုင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုအောင်သူရ၊2Stoke/ Low RPM Marine Engine တွေမှာဆိုရင် Critical Range လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်၊ RPM ဘယ်လောက် က နေ ဘယ်လောက်အတွင်း အကြာကြီး မမောင်းရဘူးပေါ့လေ၊ Maneuvering မှာ Main Engine RPM ကိုလိုအပ်သလို ကစားရပါတယ်။ Main Engine RPM ဟာ Critical Range ထဲမှာ သက်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ထက် ပိုပြီးကြာကြာမောင်းနေရင် Alarm လာပြီး Safety System က Engine ကို Slow Down လုပ်ပါတယ်။ Maneuvering အတွက်ပေးတဲ့ Commend အရ RPM တခုကနေ နောက် RPM တခုကိုပြောင်းတဲ့အခါ Critical Range ကို ဖြတ်ရမယ်ဆိုရင် မြန်မြန်လေး ကျော်ပြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျား။
12-16-2009, 07:28 AM
Vibration ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက် မှာ Torsional Vibration ဆိုတာလေးဖြည့်ပေးပါရစေ။ သဘေ်ာတွေမှာ Torsional Vibration အတွက်။ GERMANNISCHER LLOYD (GL) ဆိုတဲ့ Classification Society တခုရဲ့ Regulation ပါ။ အစ ကတော့ Marine Engineering ခေါင်းစဉ်အောက်က Rules &amp; Regulation မှာတင်ဖို့ပါ။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့ ဒီမှာပဲ တင်ဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျား။
PROPELLER ကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ VIBRATION လေးပါ။
PROPELLER UN GROUPING
PROPELLER OIL TRANSFER TUBE
PROPELLER TO ENGINE TRANSMISSION LINE ( DRIVE SHAFT )
PROPELLER BLADE DEFECTS ( CORROSION / AGING / LIFE EXPIRED ) စတာလေးတွေပါ။
PROPELLER VIBRATION ကနေ AIRFRAME VIBRATION ဖြစ်စေပါတယ်။